एक गरिब वृद्ध बुवा र छोरीको कथा तपाइँको जीवन बदल्न काफी छ। पढ्नुहोस सकारात्मक उर्जा लिनुहोस् – Halkhabar kura
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०७:४८
एक गरिब वृद्ध बुवा र छोरीको कथा तपाइँको जीवन बदल्न काफी छ। पढ्नुहोस सकारात्मक उर्जा लिनुहोस्
जेठ १५ शनिवार
आज पनि हामीले एउटा सकारात्मक उर्जा दिने कथा लिएर आएका छौं।
यो कथा पुरै पढ्नुहोस् र आफूमा सकारात्मक भावको विकास गर्नुहोस।
(लेखक : सन्जिव न्यौपाने )
कुनै एक शहरमा एकजना गरिब बुवा र छोरी बस्थे। उनीहरु धेरै ऋणमा पनि थिए। एकदिन ऋण दिने व्यक्तिले अनौठो प्रस्ताव लिएर आयो।
उसले ति वृद्ध बुवा र छोरी छेउ आएर भन्यो। म तिमीहरुको ऋण सबै माफ गरिदिन्छु तर एउटा शर्त छ।
शर्त अचम्मको थियो। तिम्रो छोरीले म संग बिहे गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको शर्तमा छोरीले अलिकति कालो अनुहार लगाएको देखेर उसले फेरी भन्यो, ” ल ठिक छ म दुईवटा ब्यागमा एउटामा सेतो ढुङ्गा राख्छु अनि अर्कोमा कालो। अनि तिम्रो छोरीले दुई मध्ये एक झोला रोज्नुपर्छ। संयोगवश यदि तिम्रो छोरीले कालो ढुङ्गा रोजी भने म संग बिहे गर्नुपर्छ र यदि सेतो ढुङ्गा रोजी भने म ऋण माफ गरिदिन्छु तर म संग बिहे गर्नुपर्दैन। ”
त्यो शर्त छोरीलाई पनि ठिक लाग्यो। त्यसपछि उसले दुईवटा झोला लिएर आयो। तर, उक्त वृद्ध बुवाको छोरीले देखेकी थिई कि उसले दुवै झोलामा कालो ढुङ्गा राखेको छ। अब दुईमध्ये जुन रोजेपनि कालो नै रोजिने भयो र उ संग बिहे गर्ने पर्ने भयो।
छोरीसंग केवल ३ वटा उपाय थिए ,
१ ) दुवै झोलामा कालो ढुंगा छ भन्नेकुराको पर्दाफाश गरिदिने।
२ ) शर्त नै नमान्ने र ढुङ्गा लिन अस्विकार गर्ने।
३ ) जानाजान ढुङ्गा रोज्ने र बुवाको लागि ठुलो त्याग गर्ने।
त्यसपछि एकाएक उनि अघि बढिन्। उनले एउटा झोलाबाट ढुङ्गा निकालिन् र दुर्घटना भएजसरी जमिनमा खासालिदीईन। जमिनमा अरुपनि सेता र काला ढुङ्गाहरु थिए। खसेको ढुङ्गा कुन हो थाहा नहुने भयो। त्यसपछि हत्त न पत्त ति छोरीले भनिन् , ” यहाँ कुन खस्यो थाहा भएन तर तपाइँले नै दिनुभएको अर्को झोलामा हेरौं है त कुन रहेछ ? ” यति भन्दै उनले अर्को झोला खोलिन् र त्यहाँ रहेको कालो ढुङ्गा देखाएर भनिन् , ” पक्कै मैले रोजेको ढुङ्गा सेतो रहेछ किनकि तपाइँले एउटामा कालो र अर्कोमा सेतो राख्नुभएको थियो। यसमा कालो छ भनेपछि मैले रोजेको सेतो हो। ”
यसरि उनले आफू पनि जोगीइन र आफ्नो बुवाको ऋण पनि माफ गरिन्।
ज्ञान : हामि जीवनमा सधैं हामीले देखेका उपाय बारे मात्र सोच्छौं। कहिलेकाहीं हामीलाई लाग्छ , अब कुनै उपाय छैन। न जीवन नै तहस नहस गरिदिउ कि भन्ने भाव पनि आउछ। समस्या आउदा आत्तिएर भाग्न खोज्छौं। समाधान नै देख्दैनौ। तर, जसरि यहाँ छोरीसंग पनि केवल ३ उपाय देखिन्थ्यो तर उनले अलिकति विचार गर्दा आफूलाई परेको दुवै संकटबाट मुक्त भईन। यदि अलिकति गल्ति गरेको भए झनै अप्ठेरो परिस्थिति आउथ्यो र जीवन पनि बर्बाद हुन्थ्यो। ठिक त्यसै गरि , हामीले मौकामा सहि विचार गर्न सक्नुपर्छ। सहि निर्णय लिन सक्नुपर्छ। जीवनमा त्यस्ता हजारौं उपाय हुन्छन् जसबारे हामि चिन्तन नै गर्दैनौं। निराश नहुनुहोस , जिवनमा उपाय धेरै छन्। केवल बाटो चिन्न सक्नुपर्छ।
Previous एउटा हात्तिको यो कथा ! तपाइँको जीवन बदलिन्छ। अहिल्यै पढ्नुहोस , प्रेरणा लिनुहोस्
Next ६८१ अरब रुपैयाँका सम्पतीका मालिकको छोरा बने बौद्ध भिक्षु